Vanhu Vakawanda Voenda Kunobayiwa Nhomba yeCovid-19 Vachibhadhara Mari
Nyamavhuvhu 21, 2021
Vamwe vagari vekuMasvingo vava kuona zviri nani kuenda kunobayiwa nhomba yekudzivirira Covid-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pasina muripo.
Mumwe mugari wemumusha weRujeko, VaKnowledge Matumba,vati vakandobayiwa nhomba kuchipatara chisiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomira mumutstse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva.
VaMatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika madhora maviri ekuAmerica iyo yakatarwa nehurumende.
Mumwe mugari, VaJohanes Chihwani, avo vati vakabayiwawo kuchipatara chakazvimiririra vati kunyange kuchibhadhriswa, mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa.
Mutauriri weZimbabwe National Family Planning Council muMasvingo, VaHebert Chikosi, vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobaiwa nesangano ravo senzira yekutiza mitsetse kuzvipatara zvehurumende.
Chimwe chipatara chakazvimirira cheCIMAS, chiri kubayawo vanhu muMasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical Aid.
Mumwe mushandi ataura ne Studio 7 paCIMAS aramba kudomwa nezita rake nekuti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingabhadariswi.
Muridzi weMakurira Private Hospital, Dr Phenias Makurira, vati zvipatara zvakazvimiririra zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza huwandu hwevanoda kubayiwa nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu svondo rinouya.
Mutauriri weCovid-19 Taskforce muMasvingo, VaRodgers Irimayi, vati hurumende inotenda kubatsirwa kwairi kuitwa nevezvipatara zvakazvimirira uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza huwandu kuzvipatara zvehurumende.
Nyanzvi mune zvehutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda.
Nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwe che Covid-19 munyika izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri, 4 220.
Vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu, 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122 288.
Vanhu vabayiwa nhoba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manonwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe, 2 271 729.
Vabiawa nhomba yepiri vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nevapfumbamwe, 1 427 159.
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda reCovid-19.